XOG KASHIFAAD: Afar arimood oo DFS ay dooneyso & Itoobiya oo Hal shardi ku xirtay Farmaajo - Hablaha Media Network
XOG KASHIFAAD: Afar arimood oo DFS ay dooneyso & Itoobiya oo Hal shardi ku xirtay Farmaajo
HMN:- Afar arrimood oo ay dawladda Soomaaliya danaynayso taasi oo ku xiran dhanka Itoobiya iyo dawladda Soomaaliya oo laga doonayo in ay hal arrin fuliso.
1- In Itoobiya aanay faragalin ku samayn wixii khuseeya siyaasadda arrimaha dibadda iyo tan gudaha islamarkaana ay kala tashato dawladda Soomaaliya halka ay kala xiriiri lahayd Maamul goboleedyada.
2- In ay gacan ka gaysato soo xero galinta saraakiisha xarakada Al shabaab, halkii ay ka taageeri lahayd.
3- In wadamada Igad gaar ahaan Itoobiya ay Soomaaliya ka gacansiiyaan qaadista cunaqabataynta Soomaaliya si golaha amaanku u aqbalo codsiga Wadamada Igad.
4- In Gen, Gabre oo ay Soomaalidu aad uga soo horjeeday laga dhex bixiyo siyaasadda Soomaaliya.
Waxaa kale oo dawladda Soomaaliya aan ka soo xigtay in ay jirto caqabado uga furan dhanka Imaaraadka carabta taasi oo hadii aan la xalin caqabadaha Itoobiya ay halis gali karto horumarka dhanka amniga iyo siyaasadda Soomaaliya.
Dhanka Itoobiya waxaa ay aad u danaynaysaa hal qodob oo ah in Saraakiisha ONLF aanay gabaad ka dhigan gudaha Soomaaliya oo hadii ay dhacdo ay buri karaan heshiisyadaan oo dhan.
Waxaa intaasi dheer in si fiican loola dhaqmo saraakiisha ONLF maadaama aan addunka looga aqoonsanayn argagixiso taasi oo ay dawladu sheegtay in ay ku adkaysanayso.